वैदेशिक रोजगारीको जोखिम | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
वैदेशिक रोजगारीको जोखिम
२०७६ आश्विन ८, बुधबार ०७:५३ गते
चाहेर होस् वा नचाहेर नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । अहिले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एक सयभन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । बर्सेनि पाँच लाख युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विदेश जानु युवाको निर्विकल्प उपाय बन्न पुगेको छ । दैनिक १६ सयको हाराहारीमा युवा बाहिरिँदा मुलुकले बेहोर्नु परेको दीर्घकालीन श्रमशक्तिको घाटा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, विदेशिएका युवाले रोजगारमा बेहोर्नु परेका सास्ती, भोग्नु परेका कठिनाइ र ठगिनु परेका पीडाको फेहरिस्त झनै भयावह छ । नेपाली समाजलाई विदेश मोहले यतिसम्म गाँजेको छ कि हरेक घरमा एसईई उत्तीर्ण नहुँदै विदेश जाने मानसिकता तयार भइसकेको हुन्छ । विदेशमा प्रशस्त कमाइ गर्न सकिने आशामा अधिकांश युवा ऋण खोजेर, जग्गा धितो राखेर, सुदखोरसँग मिटरव्याजमा पैसा लिएर विदेशी भूमिमा श्रम गर्न तयार भइरहेका छन् । तर, तिनै युवा म्यानपावर कम्पनी तथा दलालको फन्दामा परेर ठगिएका खबर पनि उत्तिकै सार्वजनिक भइरहेको छ ।
नेपाली युवालाई विदेश जानुपर्ने नियति त छँदैछ । अहिले विदेशिएका युवा कति सुरक्षित छन् र रोजगारीको सुनिश्चितता कत्तिको छ भन्ने सवालचाहिँ बढी मह¤वपूर्ण भएको छ । विगत दस वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको तथ्याङ्क कहालीलाग्दो छ । मानवअधिकारका लागि जनमञ्च नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ६ हजार ७०८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हरेक दिन युवा विदेश जान लामबद्ध भइरहँदा दैनिक तीनवटा लासका बाकसहरु त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने गरेका छन् । विदेशमा कमाइ गरेर भविष्यमा खुसी जीवन बाँच्ने सपना बोकेर आफ्नो मातृभूमि छाड्ने तिनै युवा काठको बाकसमा बन्द भएर फर्किंदा कति सपनाहरुको मृत्यु हुन्छ ? कति आशाहरु निराशामा बदलिन्छन् ? र, कति भरोसाका दियोहरु निभ्छन् ? कल्पना गर्दा पनि नमीठो पीडा हुन्छ । विदेश जानुअघि आवश्यक तालिम, सीप, कामसम्बन्धी दक्षता, सम्बन्धित देशको नियम कानुनबारे जानकारी र सुरक्षाको सुनिश्चितताविना रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारहरु अनाहकमा ज्यान गुमाउन विवश छन् ।
आफूसँग सीप, पर्याप्त ज्ञान र काम गर्ने क्षमता छैन भने विदेश धेरैका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । अज्ञानताकै कारण सयौँ नेपाली विदेशी जेलमा फस्न पुगेको दृष्टान्तले पनि अनुभव र सीपविना विदेश मोह राख्नु मृत्युकुण्डमा हाम फाल्नुबराबर हुन्छ । औसत नेपाली कामदारले विदेशमा गर्ने भनेको थ्रिडी (डर्टी, डिफिकल्टी र डेन्जरस) काम नै हो । थ्रिडी काम, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, कुटपिटलगायतका कारणले नेपाली युवाको ज्यान जाने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये धेरैजसो कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको सिकार हुन्छन् भने कतिपय सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिन्छन् । यसबाहेक, आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । कामको दबाब, भाषिक समस्या र पारिवारिक उल्झन तथा डिप्रेसनलगायतका कारणले दुवई, मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा नेपाली युवाको बढीजसो मृत्यु हुने गरेको छ । असुरक्षित मानिएका मुलुकमा ठूलो संख्यामा युवाले ज्यान गुमाउनु परे पनि राज्यले विदेश पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छैन । असामयिक ढंगले हुने मृत्यु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । सरकारले विदेशमा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै जनशक्ति पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारको विकल्प दिने खालका योजना ल्याउनु अतिआवश्यक देखिएको छ ।